Global Voices teny Malagasy » Ny ‘Hakanton’ny’ Tsy Fahazakàna Lahy Tia Lahy Na Vavy Tia Vavy, Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Mey 2015 10:46 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Tantely
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Akon'ny RuNet
Nandrahona ny hanafika ireo lahy tia lahy na vavy tia vavysendra azy ito lehilahy ito. Sary avy tamin'i Lena Klimova.
Lena Klimova, ny mpamorona ny Children-404  (Ankizy-404), tambajotra amin'ny aterineto, hanampiana ireo tanora LGBT any Rosia, mitovitovy amin'ilay fanentanana “It Gets Better” (Ho Tsaratsara Kokoa io) any Etazonia, dia nanao tetikasa vaovao  natao hahamenatra ireo mpampiasa aterineto izay nandefa fandrahonana ho faty tany aminy.
Ny 20 Aprily, namboraka rakitsary i Klimova, nitondra ny lohateny hoe “Olona Tsara Tarehy sy ny Zavatra Nolazain'izy Ireo Ahy “, izay nandefasany ho hitan'ny besy ny maro ny sarin'ireo olona tsirairay amin'ny fiainan'izy ireo andavan'andro, misy ireo hafatra mandrahona nalefan'izy ireo taminy tao amin'ny VKontakte, ilay tambajotra sosialy lehibe indrindra any Rosia.
Mampiseho ireo olona tsirairay amin'ny bika tsotra ary miaraka amin'ny olon-tiany ireo sary: lehilahy iray maka sary miaraka amin'ny osy, vehivavy iray mamihina fehezan-draozy, sy ny sisa. Ny soratra kosa anefa, dia vetaveta ary mahatsiravina, mahatonga fifampitsipahana lehibe eo amin'ny mombamomba ireo olona, amin'ny maha olon-tsotra azy, sy amin'ny maha olona tsy mahazaka olona tia firaisana mitovy azy ireo.
Misy sary 29 isa samihafa ankehitriny ny rakitsarin'i Klimova. Namerina nandefa ny sasany tamin'ireo sary ireo ny RuNet Echo, miaraka amin'ny fanakonana ny mombamomba ny tsirairay sy ireo hafatra jiolahim-boto ho an'i Klimova, nadika ho amin'ny teny Anglisy.
Angatahana ny fahanginan'ny mpamaky, satria tena mahatsiravina ny fomba fiteny.
Sary avy tamin'i Lena Klimova. VKontakte.
Sasha: Rahoviana ihany no hanakatona io vondrona vendrana io ianao. Halako io tsy misy fotony io. Ny fitifirana anao, ry ilay kala makorelina kely ity, no hany fiantombohan'ny zavatra mendrika anao.
Aisha: Raha izaho manokana, mieritreritra aho fa makorelina adala ianao. Mieritreritra ve ianao fa manampy na inona na inona amin'io fivahinianana masina io?? Mandehana any dia mamonoa tena mialoha ny hahatongavan'ny hafa any aminao!!! Tokony hidina mihitsy ny olona sahala aminao!
Alexander: Ianao ry ilay kala makorelina ity! Nahoana ianao no manao io fanindrahindràna ny fitiavan'ny samy mitovy firaisana vendrana io? Atokisako fa tsy hisy olona hanao vetaveta aminao, fa olanao izany. Hidio fotsiny io vondrona mankaloiloy io. Raha tsy izany, andeha aho ary ny tenako mihitsy no hisambotra ny iray amin'ireny sarimbavy ireny, ary tonga dia darohako ataoko mihinana ny fatiny izy. 🙂 Ary eo amin'ny tarehiny mankaloiloy io, soratako eo ny anaran'ny vondronareo, ary ho FAHADISOANAO izany rehetra izany!
Maxim: Ho iray amin'ireo voalohany handrehitra ny afon-kitay handoroana anao aho. Ianao aza manana masonà mpifoka rongony, ilay vongan-tay kely misolitika lò ity.
Elizaveta: Hidin'izy ireo isan'andro ianao androany. Tsy ho afa-maina akory ny zavatra izao ataonao izao. Manantena aho fa ho may any amin'ny afobe hijalijaly ela be ianao, amin'ny fanindrahindranao ny fifankatiavan'ny lahy samy lahy sy vavy samy vavy! Matesa, ry ilay tsy vanona. Mialà amin'ny firenenay, ry ilay vongan-tay ity. Na ho ela na ho haingana, hanefa noho izao ianao!
Kristina: Matesa may any amin'ny afobe any daholo ianareo vetaveta rehetra ireo! Raha hitako ianao, ho kendaiko amin'ireto tanako ireto mihitsy.
Roman: Ahah, azoko amin'izay: tsy misy olona te-hanao firaisana aminao, dia amin'izao ianao te-hahazo izany amin'ireo Rosiana? Ny olona ohatra anareo no ireo mamono ny “Slavs”! Tsy misy toerana ho anareo ao amin'ny fiarahamonina. Tsara, mandehàna ary hindrahindrao any amin'ireo firenena hafa io resaka adala io, fa nahoana no eto? Maty ho anareo ny dadabeako, ianao ry ilay biby vetaveta ity! Tsy ho leferina mihitsy ny LGBT! Ary hanenina izany mandritra ny andro sisa hiainany ireo olona nanohana anareo.
Kolya: Lena, mankahala anao aho. Tena mankaloiloy ianao, ary raha nananako aza ny fahefana, notifiriko ho faty ianao. Manantena aho fa horaràn'izy ireo ny tetikasanao ary hesorina amin'ny fiarahamonina ianao. Tsy misy mila anao ny olona, afa-tsy ireo biby toa anao ihany.
Ny volana Novambra 2014, nanomboka nikendry ny vondron'i Klimova ireo mpitandro ny filaminana Rosiana, Children-404, noho ny fanaparitahana ny “fampielezana ny fifankatiavan'ny lahy samy lahy ary vavy samy vavy.” Ny faramparan'ny volana Martsa 2015, namoaka didy ny fitsaràna ao St. Petersburg haniitsohana  ilay vondrona tao amin'ny VKontakte, izay mampalaza azy indrindra. Manankery nanomboka ny 25 Aprily ilay didim-pitsaràna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/14/69428/
 tetikasa vaovao: https://www.facebook.com/klimovalitred/posts/372190966305520?pnref=story
 Olona Tsara Tarehy sy ny Zavatra Nolazain'izy Ireo Ahy: https://vk.com/album6184701_214830577